ညမင်းသား: ကျားဟော်မုန်း မြင့်တက်လာစေမည့် အိမ်တွင်းနည်းများ
အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ကျားဟော်မုန်း တက်စတိုစတီရုန်း အဆင့်မြင့်တက်စေဖို့အတွက် သဘာဝကျတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာနိုင်ဖို့ ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
၁. ဇင့် (သွပ်)ဓာတ် ပါဝင်သည့် အာဟာရစားပါ
ဇင့်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အစားအသောက်တွေက ကမာကောင်၊ အမဲသား၊ တိရစ္ဆာန်အသည်း၊ ပင်လယ်စာ၊ ကြက်၊ ဘဲ၊ အခွံမာသီး၊ အစေ့အဆန်၊ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ ဆန်လုံးညို၊ ဒိန်ခဲ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်စတဲ့ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဇင့် (သွပ်)ဓာတ်ဟာ ကျားဟော်မုန်း တက်စတိုစတီရုန်း ထုတ်လုပ်ရေး အတွက် အရေးပါပါတယ်။ ဇင့်ဓာတ်ဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့ သုက်ကောင်တွေ ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် ကူညီပေးသလို သုက်ကောင်အရေအတွက် များများ ထွက်ရှိစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဇင့်ဓာတ်နည်းနေရင် ကျားဟော်မုန်း တက်စတိုစတီရုန်း အဆင့်လည်း လျော့နည်းနေနိုင်ပါတယ်။
၂. ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အဆီပိုများကို လျှော့ချပါ
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီပိုတွေရှိတာက အမျိုးသားတွေရဲ့ ယောက်ျားပီသမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီပိုတွေ ရှိလေလေ၊ အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းအဆင့် များလေလေ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် အဆီပိုတွေများပြီး အဝလွန်နေရင် တစ်လမှာ ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ပေါင်ခန့် လျော့ကျအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
၃. ကောင်းမွန်သည့် အဆီစားပါ
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အဆီတွေဖြစ်တဲ့ အခွံမာတဲ့ အစေ့အဆန်၊ သံလွင်ဆီ၊ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်စစ်စတဲ့ အစာတွေကို အစားများတဲ့ အမျိုးသားတွေက ကျားဟော်မုန်း တက်စတိုစတီရုန်းအဆင့် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်နေတာကို လေ့လာမှုတွေအရ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှ ကျားဟော်မုန်း တက်စတိုစတီရုန်း ထုတ်လုပ်ရေးမှာ ကောင်းတဲ့အဆီတွေ လိုအပ်နေလို့ပါ။
၄. စိတ်ဖိစီးမှုကို တွန်းလှန်အနိုင်ယူပါ
စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကော်တီစောဆိုတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာ ဟော်မုန်းတစ်မျိုး ထွက်လာပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းဟာ ကျားဟော်မုန်း တက်စတိုစတီရုန်း ထုတ်လုပ်မှုကို နှောင့်ယှက် ဟန့်တားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာ ဟော်မုန်းဟာ ဗိုက်ပူစေတဲ့အတွက် ဗိုက်မှာ အဆီပိုတွေရှိလေလေ၊ တက်စတိုစတီရုန်းအဆင့် လျော့နည်းလေလေဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျစေဖို့ တရားထိုင်တာ၊ အသက်ပြင်းပြင်းရှူတာ၊ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက် အနားယူတာစတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
၅. တစ်ည ရှစ်နာရီ အိပ်ပါ
အိပ်စက်ချိန်နည်းတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ တစ်ည ၆-၈ နာရီ အိပ်စက်တဲ့ အမျိုးသားတွေထက် ကျားဟော်မုန်း တက်စတိုစတီရုန်းအဆင့် လျော့နည်းနေတယ်လို့ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။ အိပ်တဲ့အခါမှာလည်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၆. ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ
လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်ပြုလုပ်တာကြောင့် အဆီပိုကင်းပြီး ကြွက်သားထုထည် အားကောင်းကာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တက်စတိုစတီရုန်း ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ကို တိုးစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ လမ်းလျှောက်တာ၊ ပြေးတာ၊ ရေကူးတာစတဲ့ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ဆောင်သင့်သလို ကြွက်သားထုထည် သန်စွမ်းစေမယ့် အလေးမလေ့ကျင့်ခန်း၊ အိပ်ထမတင်လေ့ကျင့်ခန်း၊ ထိုင်ထ လေ့ကျင့်ခန်းစတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်း လုပ်သင့်ပါတယ်။
၇. ဗီတာမင်ပါဝင်သော အစားအစာများ စားပါ
ဗီတာမင် အေ၊ ဘီ၊ အီးတွေပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားတာက တက်စတိုစတီရုန်း ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အရေးပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိမ်းရောင်နဲ့ အဝါရောင်ရှိတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကို အစုံ စားပေးသင့်ပါတယ်။ အခွံမာသီး၊ အစေ့အဆန်တွေထဲမှာလည်း ယင်းဗီတာမင်ဓာတ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
၈. ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို မပူလွန်းအောင် သတိထားပါ
အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကျပ်ကျပ် ဝတ်တာ၊ ရေပူစိမ်ပြီး ရေချိုးတာ၊ ပေါင်ပေါ်မှာ Laptop တင်ပြီးသုံးတာ စတဲ့ နည်းလမ်းတွေက ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်း အထူးသဖြင့် အမျိုးသားအင်္ဂါကို ပူစေတာကြောင့် တက်စတိုစတီရုန်း ထုတ်လုပ်မှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီဝတ်ရာမှာ ကျပ်လွန်းတာ ရှောင်ပါ။
** စိတ်ကျန်းမာမှ ချမ်းသာရ…
ပင်လယ်ရေမြင့်တက်ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် လယ်မြေဧက (၁၀၀...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပခရီးစဉ် စတင်ထွက်ခွာ
အလုပ်သမား အခြေခံလစာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်အညီ သတ်မ...